साङ्ग्रिलामा पर्यटन र होटलसम्बन्धी १४ विधाका तालीम | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा साङ्ग्रिलामा पर्यटन र होटलसम्बन्धी १४ विधाका तालीम
साङ्ग्रिलामा पर्यटन र होटलसम्बन्धी १४ विधाका तालीम
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित साङ्ग्रिला टुरिजम एण्ड होटल ट्रेनिङ सेण्टर प्रालि पर्यटन तथा होटल तालीमका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । विसं २०५६ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सम्बन्धन लिई यसले होटल व्यवस्थापनसम्बन्धी शीपमूलक तालीम दिन शुरू गरेको हो । पर्यटन तथा होटलसम्बन्धी तालीम दिने शैक्षिक संस्थामध्ये यो नेपालकै दोस्रो पुरानो संस्था भएको सञ्चालक निरण श्रेष्ठको दाबी छ ।
स्थापनाकालदेखि हालसम्म यस संस्थाबाट करीब ७ हजार ५ सय जनाले तालीम प्राप्त गरिसकेको उनले बताए । होटलसम्बन्धी तालीम लिनेमध्ये ६५ प्रतिशत विदेशमा र टुरिजमसम्बन्धी तालीम लिनेमध्ये ९५ प्रतिशतले नेपालमै रोजगारी गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेपालका ६५ प्रतिशत ट्राभल एजेन्सीमा यसै संस्थाबाट तालीम लिएका जनशक्ति कार्यरत रहेको र करीब ३१ जनाले आफै ट्राभल एजेन्सी चलाइरहेको पनि सञ्चालक श्रेष्ठको दाबी छ ।
होटल म्यानेजमेण्ट, फूड एण्ड बेभरेज म्यानेजमेण्ट, फूड प्रिपरेशन, कफी मेकिङ, फूड एण्ड बेभरेज सर्भिस, बार टेण्डर, फ्रण्ट अफिस, हाउसकिपिङ, केयर गिभर, बेकरी, आइसक्रीम, टूर एण्ड ट्राभल म्यानेजमेण्ट, एयरलाइन्स टिकेटिङ र टूर अपरेशन गरी यस संस्थाले १४ ओटा विधाको शीपमूलक तालीम दिँदै आएको छ । सञ्चालनमा रहेका विभिन्न विधाका कोर्सहरू ३ महीनादेखि १ वर्षको अवधिसम्मका छन् । शुल्कका हिसाबले रू. ४ हजारदेखि रू. ४ हजार ६ सयसम्मका कोर्स रहेका छन् । ‘नेपालीको आयलाई ध्यानमा राखेर हामीले हरेक कोर्सको उचित शुल्क निर्धारण गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने ।
स्पेनको एक सञ्चार संस्था एडिटोरियल अफिसले ‘३७औं इण्टरनेशनल अवार्ड फर टुरिष्ट, होटल एण्ड क्याटरिङ इण्डष्ट्री–२०१२’ द्वारा साङ्ग्रिला टुरिजम एण्ड होटल ट्रेनिङ सेण्टरलाई सम्मान गरेको छ । सो संस्थाले सर्वेक्षण गरेर पर्यटन र होटलसम्बन्धी तालीम दिने नेपालका संस्थामध्ये साङ्ग्रिला सर्वोत्कृष्ट ठहरिएपछि सो अवार्ड प्रदान गरेको श्रेष्ठले बताए । पर्यटन उद्योगद्वारा नै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले आगामी दिनमा आफ्नो संस्थाको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उनले बताए ।